लगातर हाइ आइराख्नु खतरा हुनसक्छ, यसबारे ख्याल नगर्दा यसरी हुनसक्छ खतरा ! | सुदुरपश्चिम खबर
लगातर हाइ आइराख्नु खतरा हुनसक्छ, यसबारे ख्याल नगर्दा यसरी हुनसक्छ खतरा !
सामान्यतया हाई निद्रा नपुगेको खण्डमा आउँने आम जन विश्वास रहँदैं आएको छ । व्यस्त जीवनशैलीले स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न गाह्रो हुन थालेको छ । एक मानव शरीरलाई निन्द्रा नपुगेको अवस्थामा शरीरमा थकान महसुस हुनेगर्छ भने शरीर पूर्ण रुपले स्वस्थ नहुने पनि गर्छ । चिकित्सकहरुको अनुसार निन्द्रा नपुगेको कारण हरेकलाई हाई आउने गर्छ । तर सामान्य भन्दा धेरै हाई आउनु भने स्वास्थ्यको लागि खासै राम्रो हुँदैन । सामान्य भन्दा धेरै हाई आयो भने निम्न स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हुन सक्छ ।
यदि सामान्य भन्दा धेरै हाई आइरहेको छ र हाई आउने क्रममा मुटु पनि दुख्ने गर्छ भने हृदयघात हुन सक्ने सम्भवना धेरै हुने गर्छ । जसको कारण हाई सँगै मुटु पनि दुख्यो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन । यस्तो अवस्थालाई तपाईले कहिल्लै पनि सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।
सामान्य भन्दा धेरैं हाइ आइरहेको छ भने तपाईको शरीरमा थायराइडको हर्मोनको कमि भएको अथवा थायराइड हर्मोनको उत्पादनमा केहि समस्या आएको हुन सक्छ । यसरी लगातार हाई आइरहेको खण्डमा हाइपोथायराइड हुने गर्छ । यो बेलामा पनि चिकित्सकहरुको अनुसार तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
फोक्सो सम्बन्धि रोग
तपाईलाई कुनैं रोग लागेको छ र पटकपटक औषधि अ्खाइरहनु भएको छ भने ख्याल गर्नुहोला । रोग लगेको व्यक्तिलाई बारम्बार हाइ आउँनु खत्तरा हुन सक्छ । औषधिहरूको बारम्बार बारम्बार उपयोगको कारण हाइ आउने गर्छ । यस्तै फोक्सो सम्बन्धि रोग लागेको खण्डमा शरीरमा अक्सिजनको कमि हुँदा पनि धेरै हाई आउने गर्छ ।
हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छौ
दिनभर हाइ आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् कारण जान्नुहोस्
थकित हुने, पट्यार मान्ने, झिँझो, झर्को मान्ने, अल्छि गर्ने यो पुस्ताको विशेषता भइसकेको छ। दिन नै सुतेर बिताउने यो आधुनिक मानिएको जमानामा कामको समयमा हाइ आउनु, अल्छि लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन। तर रहनसहन, खानपिन र स्वास्थ्यको कारण सिर्जनशीलता देखाउने समयमा अल्छिपना देखिदाँ बुद्धिमान व्यक्तिले यसको निदानको उपाय खोज्छ।
किन अल्छि लाग्छ त ?
निन्द्रा शरीरको आवश्यकता हो। राती राम्रोसंग निन्द्रा परेको छैन भने दिउँसो शरीरमा आलस्यता आउँछ। राती सुत्ने समय मोबाइल चलाउने नगर्नुस्। यसले तपाइको निन्द्राको गुणस्तर घटाउँछ, अर्थात शरीरले पर्याप्त आराम पाउँदैन अनि भोलीपल्ट थकित महसुस हुन्छ।तर राम्रोसंग सुत्नुभएको छ भने पनि पट्यार लाग्ने, वा आलस्यता आउँछ, किन?
आलस्यसंग जुझ्ने केही उपाय छन् ।
१. काममा फोकस गर्न सक्नुहुन्न, हाइ मात्र आइरहन्छ भने छोटो पावर न्याप लिनुस् । अर्थात केही मिनेटको लागि सुत्नुस् । १५–२० मिनेट टेबलमै टाउको अड्याएर सुत्नु भए हुन्छ। उठेपछि तपाइले फ्रेस अनुभव गर्नुहुनेछ ।
२. स्वास्थ्यको लागि कफि पटक्कै राम्रो होइन । तर निन्द्रा र आलस्यतासंग झुझ्ने कारकार उपाय भने हो। निन्द्राले हैरान गरेको छ भने तातो कफि पिइदिनुस् तत्कालै राहत दिन्छ ।
३. कुनै उपायले पनि आलस्यता भगाउँदैन भने केही बेर घर वा अफिसबाट निस्कनुस् अनि हिड्नुस। कम्पाउन्ड, आँगन वा बाटोसम्म पुग्नुस्, एकछिन टहलिनुस्। शारीरिक कर्मले शरीर खुलाउँछ, आलस्यता भगाउँछ।
४. दिनमा कति पानी पिउनुहुन्छ । यदी तपाइको पिसाबको रंग पहेँलो वा त्यो भन्दा पनि गाढा छ भने शरीरमा पानीको कमी भएको छ। प्रशस्त पानी पिउनुस । पिसाबको रंग सफा वा हल्का पहेँलो छ भने शरीरमा पानी पर्याप्त भएको बुझिन्छ। पानीले शरीरमा ताजापन र स्फूर्ति कायम राख्छ ।
५. प्याकेट गरिएका अनि बासी खाना खाँदा शरीरले पर्याप्त उर्जा पाउन सक्दैन। उल्टै ती खाना पचाउन शरीरले आफ्नो संचित शक्ति खर्च गर्छ। फलतः निन्द्रा बढी लाग्ने हुन्छ। फलफुल र फ्रेस खाना खाने गर्नुस् शरीर स्फुर्त रहन्छ।
चिन्ता, तनाव र मनमा धेरै कुरा खेलाउने व्यक्ति, अर्थात आफ्नो विचार माथी राम्रो नियन्त्रण नहुँदा शारीरिक र मानसिक थकाइ लाग्ने हुन्छ। त्यसैले बिहान सबेरै उठ्ने गर्नुस, कसरत, व्यायाम, योगा गर्नुस्। यसले हाइ आउने समस्या मात्र होइन अन्य थुप्रै शारीरिक र मानसिक रोग पनि निको पार्दछ।
हाइ किन आउँछ ? कहिलेदेखि आउँछ ? केही जान्नैपर्ने तथ्यहरु
कोही मानिस हाइ काढेको देख्दा देख्नेलाई पनि हाइ आउँछ । यस्तो तपाइँलाई पनि हुन्छ होला । यस्तो किन हुन्छ, थाहा छ ? कुन समयमा हाइ आउँछ ? मानिस जन्मिएपछि कुन समयबाट हाइ काढ्न सुरु गर्छ होला ? यी सबै प्रश्न रोचक छन् तर उत्तर तपाइँलाई थाहा नहुनसक्छ । यद्यपि हाइ आउनु एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो तर यस सँग जोडिएका केही ठूलासाना कुराहरुमा हामीले ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ । एक जनालाई हाइ आएपछि त्यो देख्ने अर्को मानिसलाई पनि हाइ आउँछ । एक, दुइ हुँदै एकैचोटी धेरै मानिसमा फैलिन सक्छन् । के त्यसोभए हाइ आउनु संक्रामक क्रिया हो ? होइन ।
हाइ काढ्ने विषयमा हाम्रो समाजमा धेरै गलत सोँचाइहरु वा मान्यताहरु छन् । कतिपयले यसलाई निद्रा आएको वा अल्छी लागेको संकेतका रुपमा बुझ्दछन् । तर वैज्ञानिकहरुका अनुसार मानिसमा हाइ आउनुको कारण निद्रा वा अल्छी आउनु होइन । बेलायतको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धान अनुसार हाइ आउनु निद्रा वा आलस्यको संकेत होइन । यो हाम्रो मस्तिष्कको तापक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रक्रिया हो ।
हाम्रो सरीरको बनावट तथा कार्यविधि यस्तो प्रकारले व्यवस्थित छ की हामीले नचाहेको बेलामा समेत एकाएक हाइ आएर मुख खुल्दछ । यसले मस्तिष्कको तापक्रम घटाउनुका साथै अनुहारका मांशपेशीलाई समेत तन्काइदिन्छ ।
अमेरिकन एकेडेमी अफ स्लिप मेडिसिनमा प्रकाशित शोधका अनुसार हाइ काढ्दा सरीरमा अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्ति हुन्छ र अक्सिजनको कमीलाई पूर्ति गर्दछ । जब रगतमा अक्सिजन पूराउनका लागि फोक्सोमा पर्याप्त अक्सिजन हुँदैन तब हाइ काढ्दाको माध्यमबाट एकैसाथ ठूलो परिमाणमा मुखबाट फोक्सोसम्म अक्सिजन पुग्दछ र फोक्सोबाट रगतमा मिसिन्छ । मस्तिष्कको भित्तालाई चिसो राख्नका लागि मस्तिष्ककै निर्देशनमा मानिसलाई हाइ आउँछ ।
सन् २००४ मा गरिएको एक अध्ययनले ५० प्रतिशत मानिसहरुले आफ्नो अगाडि रहेका मानिसहरु हाइ गरेको देखेर हाइ काढ्ने गरेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो ।
सन् २०१२ को अर्को एक अध्ययनले आनुवंशिक तथा भावनात्मक रुपमा जोडिएका मानिसहरुलाई अरु मानिस हाइ काढेको देखेर आफुलाई पनि हाइ आउने देखाएको थियो । मानिस मात्र होइन चौपाया तथा अन्य प्रजातिका केही जिवहरुले समेत हाइ काढ्छन् । मानिसले कुन बेलादेखि हाइ काढ्न सुरु गर्छ होला ? यो पढ्दा अचम्म लाग्न सक्छ । गर्भमा रहेको बच्चाले ११ हप्ताको भ्रुण हुँदादेखि नै हाइ काढ्न थालेको हुन्छ । सामान्यतया हाइ काढ्ने समय ६ सेकेण्डको हुन्छ । मानिसले आफ्नो जिवनकालमा औषतमा २ लाख ४० हजार पटक हाइ काढ्ने गर्छन् ।
अमेरिकन नेसनल इन्स्टिच्युट आफ हेल्थका अनुसार हाइ आउनु सामान्य कुरा हो । यदि छिटो छिटो हाइ आउँछ भने त्यो अनिद्राको संकेत हुनसक्छ र त्यसका लागि पर्याप्त निद्रा लिनु आवश्यक हुन्छ । तर निकै छिटोछिटो हाइ आयो र कसैगर्दा पनि रोकिएन भने त्यो बिमारको संकेत हुनसक्छ । हाइ आयो भने त्यसलाई रोक्नु हुँदैन मज्जाले काढ्नैपर्छ । आएको हाइ रोक्दा त्यसले सरीरमा नकारात्मक असर पार्नसक्छ ।
यी हुन् हाइ आउने ४ कारणहरू
तपाईं रातभरि निदाउनु भएको छैन भने दिनभरि आलस्य हुन्छ। हाइ, हाइ आइरहन्छ। बेलुका अबेर खाना खानुपर्यो भने बच्चाहरू हाई काढ्दै बस्छन्। दिउँसो होस् या बेलुका एकसुरमा टिभी हेर्दै गर्दा हाइ आएर दिक्क लाग्न सक्छ। दिउँसो कार्यालयमा काम गर्दागर्दै हाइ काढेर बाथरुमामुख धुन जानुपर्दा कति नमजा होला। कहिलेकाहीँ त सबारी साधन चलाउँदा नै हाइ आएर हैरान।
मानिसलाई बारम्बार हाइ आउँछ। अक्सिजनको अभावले हाइ आउने गरेको मानिन्छ। तर, हाइ काढ्नु श्वासप्रश्वासभन्दा बेग्लै कुरा हो। श्वासप्रश्वास र हाई काढ्ने प्रक्रिया शरीर र दिमागका बेग्लाबेग्लै संयन्त्रले नियन्त्रण गरेका हुन्छन् । दिक्क लागेको अवस्थामा वा निद्रा लाग्दा हाइ आउने गरेको मानिसहरु बताउँछन्। तर हाइ आउनाका कारणहरुबारे धेरै मानिस अनभिज्ञ हुन्छन्। हाइ आउनुका कारण यस्ता छन् ।
हाइ काढ्दा दिमागलाई आधारभूत रुपमा स्वस्थ हावा प्रदान हुन्छ र शान्त बनाउँछ। सन् २०११ को एउटा अध्ययन यस तथ्यको नजिक पुगेको थियो। जस अनुसार मानिसले जाडो मौसममा धेरै र बाहिरको तापक्रम बढी हुँदा कम हाइ काढ्ने गर्छन् । हामीले मुख बाएर जोडले हाइ काढ्दा दिमागलाई थप ऊर्जा मिल्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन्। अनिदो बस्दा दिमागको तापक्रम बढ्छ। सुत्न वा दिमागलाई शितल पार्न हाइ आइरहन्छ।
‘बायोलोजी लेटर्स’मा प्रकाशित एउटा रिपोर्ट अनुसार जति ठूलो हाइ काढ्नु हुन्छ, त्यति ठूलो दिमाग हुनुपर्छ। लामो र ठूलो हाई काढ्ने स्तनधारी प्राणीको ठूलो दिमाग हुने अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएका छन्। उनीहरुको दिमागमा धेरै मात्रामा कोषहरु हुन्छन् । यदि हाइ काढ्दा दिमाग शान्त हुने हो र दिमागलाई ऊर्जा प्राप्त हुने हो भने स्वभाविक रुपमा ठूलो दिमाग हुनेहरुलाई बढी अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। तसर्थ ठूलो र लामो हाई आउँछ भने दिमाग पनि ठूलो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
हाइले स्ट्रोक, हृदयघात वा अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको पनि संकेत गर्छ। तर, अस्वभाविक रुपमा निरन्तर वा लामो हाइ आएमा मात्र स्वास्थ्य समस्या बिग्रँदैछ वा बिग्रिएछ भनेर बुझ्नु राम्रो हुनेछ। हृदयघातले भेगस नर्भ (जनु दिमागदेखि पेटसम्म फैलिएको हुन्छ) लाई बढी सक्रिय बनाउँछ, जसका कारण अत्याधिक हाइ आउँछ । मृगी रोगका बिरामी र शरीरको कोष असामान्य भएका मानिसले अत्याधिक हाइ काढ्ने विज्ञहरु बताउँछन्। त्यस्तै, टाउको दुख्ने, एन्जाइटी हुने मानिसको दिमाग तातो हुने भएकाले उनीहरुलाई बढी हाइ आउन सक्छ।
हाइ काढ्नु संक्रमणजन्य रोग जस्तै हो । यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। तसर्थ एक अर्कालाई सहानुभूति देखाउँदा वा नजिक बस्दा हाइ सर्छ। सन् २०११ मा गरिएको एक अध्ययनले हाई काढ्दा परिवारका सदस्य, साथीहरुबीच सर्ने गरेको खुलाएको थियो। नजिकैको मानिसले हाइ काढेको केही मिनेटपछि अर्को मानिसलाई पनि हाइ आउने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
नोटः माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र–पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् ।
गर्मीमा काँचो प्याज खानुका अपत्यारिला फाइदा ! पढेर सेयर गर्नुहोला !!
सुख्खा खोकी हटाउने घरेलु उपचार थाहा पाउनुहोस् !!